Kedu otu esi eme ka ndị ahịa zụta ngwaahịa Ecommerce gị? | ECommerce ozi ọma
Kedu otu esi eme ka ndị ahịa zụta ngwaahịa Ecommerce gị?
N'ezie njedebe nke ọtụtụ azụmahịa azụmahịa, bụ ịzụta. Mana ka nke a bụrụ eziokwu ọ dị mkpa iji wulite ntụkwasị obi n'etiti ndị na-azụ ahịa n'ihi na nke a dị oke mkpa iji metụta mkpebi ịzụta ha. Anyị ga-agwa gị okwu n'okpuru maka otu esi eme ihe ndị ahịa zụrụ ngwaahịa Ecommerce gị.
1 Tinye nche akara na nzere tụkwasịrị obi
1.1 Jiri usoro ịkwụ ụgwọ a pụrụ ịdabere na ya
1.2 Gosi ezigbo nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa n'ezie
1.3 Mee ka ọ dị mfe ịnweta enyemaka
Tinye nche akara na nzere tụkwasịrị obi
Gosi ndị a ihe dị na Ecommerce gị ọ bụ nnukwu ụzọ iji belata ihe egwu ndị ahịa na saịtị gị na-ahụ. A maara na maka 71% nke ndị na-azụ ahịa, ọ dị oke mkpa na saịtị e-commerce nwere ntụkwasị obi akara ma ọ bụ akara ngosi.
Jiri usoro ịkwụ ụgwọ a pụrụ ịdabere na ya
Otutu ndi mmadu achoghi zụta online n'ihi ụjọ nke igwu wayo kaadị akwụmụgwọ. Iji merie nke a, ị kwesịrị iji a a pụrụ ịdabere na ịkwụ ụgwọ n'elu ikpo okwu, na ndị ọrụ ghọtara ya na ọ na-enye ha nchebe niile ha chọrọ.
Gosi ezigbo nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa n'ezie
Nkwupụta si ezigbo ndị ahịa banyere ngwaahịa gị bụkwa ụzọ dị mma iji mee ka ha zụta ihe ị na-ere. Ntụle dị otú ahụ kwesịrị ịpụta na ibe ngwaahịa maka nsonaazụ kacha mma. I kwesịrị ịma na -enweghị ezigbo nyocha ma ọ bụ nkwupụta, ị na-etinye ihe egwu na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị ahịa gị nwere ntụkwasị obi dị ala ọ bụghị naanị na ogo, kamakwa na arụmọrụ nke ngwaahịa gị.
Mee ka ọ dị mfe ịnweta enyemaka
Mgbe ị na-azụ ahịa n'ịntanetị, ọtụtụ ndị nwere obi abụọ ma ọ bụ ajụjụ nwere ike imetụta mkpebi ha ịme ịzụta. Kedu ihe bụ usoro iwu ụgbọ mmiri, kedu ka esi adị laghachi usoroNdị a bụ ajụjụ ndị a ga-aza ma kwuo na ozi a ga-enwerịrị ike ịnweta ka ha wee nwee ike ịkọwa obi abụọ ha. Gbaa mbọ hụ na ama kọntaktị gị, akara ekwentị, adresị ụlọ ahịa, email, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Kedu otu esi eme ka ndị ahịa zụta ngwaahịa Ecommerce gị?
Kedu ka iwu nzuzo nke Ecommerce ga-adị?